ဝယ်ယူမှုကာလနှင့်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Pandawill Technology Co. , Ltd
Pandawill သည် Turn-Key အမှာစာများကိုမည်ကဲ့သို့မှာယူသနည်း။
အစိတ်အပိုင်းအများစုအတွက် ၅% သို့မဟုတ် ၅ ပိုထပ်ဆောင်းရန်အတွက်သင်၏ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအတိအကျကိုကျွန်ုပ်တို့မှာယူသည်။ ရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်ရမည့်အနည်းဆုံး / အမှာစာများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး၊ ကြိုတင်မှာယူမှုများမပြုလုပ်မီကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်
အလှည့်ကျသောအလုပ်များတွင်ပန်ဒါဝီကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကူးခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်သနည်း။
Pandawill သည်စာရင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှိပြီးသားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်များကိုအကြံပြုခြင်းသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်မှာယူမှုမပြုမီဖောက်သည်များ၏အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်သောအချက်အလက်စာရွက်များကိုပို့ပေးပါမည်။
1. ၀ ယ်ယူသည့်အချိန်သည်စုဆောင်းသည့်အချိန်များအပြင်ဖြစ်သည်။
2. အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် circuit board များအားမှာယူပါက၊ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်အချိန်ကြာရှည်သောကာလဖြစ်ပြီးဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရဆုံးဖြတ်သည်။
Pandawill သည်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ circuit board ကိုသာမှာနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သင်ပေးရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုသာကျွန်ုပ်တို့မှာယူနိုင်ပြီးသင်ကြွင်းသောအရာများကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမိန့်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော့ဖွင့်သောအလုပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
အနည်းဆုံး ၀ ယ်ယူရန်လိုအပ်ချက်ရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများကို PCBs များဖြင့်ပြန်လည်အပ်နှံသည်။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုဖောက်သည်ထံသို့ပြန်မပေးပါ။
ငါက turn-key ကိုအမိန့်အဘို့အဘယ်သို့ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်?
Excel ပုံစံဖြင့်အချက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံသောပစ္စည်း ၁ ခု။
2. အချက်အလက်အပြည့်အစုံပါ ၀ င်သည် - ထုတ်လုပ်သူ၏အမည်၊ နံပါတ်၊ အညွှန်းဖော်ပြသူများ၊ အစိတ်အပိုင်းဖော်ပြချက်၊ အရေအတွက်
4.Centroid ဒေတာ - အကယ်၍ လိုအပ်လျှင်ဤဖိုင်ကို Pandawill မှဖန်တီးနိုင်သည်။
SMT အစိတ်အပိုင်းအထုပ်များသည်များသောအားဖြင့်အစိုဓာတ်အနည်းငယ်ကိုစုပ်ယူသည်။ ဤအပိုပစ္စည်းများသည် reflow မီးဖိုထဲမှဖြတ်သွားသောအခါထိုအစိုဓာတ်သည်တိုးချဲ့။ ပျက်စီးခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံပျက်စီးမှုကိုအမြင်အာရုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်ကလုံးဝမမြင်နိုင်ပါ သင်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖုတ်ရန်လိုအပ်လျှင်သင်၏အလုပ်ကို ၄၈ နာရီအထိနှောင့်နှေးနိုင်သည်။ ဒီမုန့်ဖုတ်အချိန်သည်သင်၏အလှည့်ကျချိန်သို့မရေတွက်ပါ။
2. JDEC J-STD-033B.1 စံနှုန်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။
၅ ရက်နှင့် ၁၀ ရက်အလိုတွင်၎င်းသည်နှောင့်နှေးမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။
၂၄ နှင့် ၄၈ နာရီအလုပ်များတွင်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖုတ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏ညှိချိန်သို့ရေတွက်မရ ၄၈ နာရီအထိနှောင့်နှေးစေသည်။
၁။ သင်ရွေးချယ်သောတပ်ဆင်မှုဝန်ဆောင်မှုအပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်အရှည်၊ ပြွန်၊ အရံများနှင့်ဗန်းမှဖြတ်ထားသောတိပ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိတ်အပိုင်းများ၏သမာဓိကိုကာကွယ်ရန်ဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။
2. အကယ်၍ အစိတ်အပိုင်းများသည်အစိုဓာတ် (သို့) တည်ငြိမ်သောထိခိုက်လွယ်မှုရှိလျှင်၊ ငြိမ်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းထုပ်ပိုးပါ။
မြည်းကြိုးကိုဖြည်။ ဖြစ်စေ၊ အမြောက်အများဖြင့်ဖြစ်စေပေးသော 3.SMT အစိတ်အပိုင်းများကိုတွင်းပေါက်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ သင် SMT အစိတ်အပိုင်းများပါသောအလုပ်တစ်ခုကိုမကိုးမီကျွန်ုပ်တို့နှင့်အရင်ဆုံးအတည်ပြုသင့်သည်။ ၎င်းတို့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းသည်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဝယ်ယူရန်၎င်းတို့အားကြိုးစား။ အသုံးချရန်အတွက်အမြဲတမ်းစျေးသိပ်မကြီးပါ။